ကျွန်ုပ်တို့၏သား iPhone သို့မဟုတ် Android ၏စမတ်ဖုန်းကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ Gadget သတင်း
ကလေးများမိုဘိုင်းကို Android နှင့် iOS ပေါ်တွင်မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း
Kings သို့မဟုတ် Santa Claus သည်ငါတို့၏အိမ်မှကလေး၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့ကလေးတွေလို့ပြောပေမယ့်အသက်အရွယ်ကိုတော့မသတ်မှတ်ပါဘူး ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့သိပ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူး၊, ဤကိရိယာအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုထားသည့်အသက်အရွယ်ကဘာလဲ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ် လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်အင်တာနက်သုံးနိုင်သောအရွယ်မရောက်သေးသူသည်မိဘ၏အနိမ့်ဆုံးထိန်းချုပ်မှုကိုခံယူရန်အကြံပြုသည် သင့်ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်အကြောင်း။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောမိဘများ၊ နည်းပညာလောကတွင်အလွန်ညံ့ဖျင်းသောအရာဖြစ်သော်လည်းပင်ထိုထိန်းချုပ်မှုကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
ဒါမလုပ်ခင်ကျွန်ုပ်တို့ကဟုတ်တယ် (သို့) တတိယပါတီလျှောက်လွှာတွေလိုအပ်တယ် ယခုစက်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံမှကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသော parameters များကိုထိန်းချုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
2 သင့်မှာ Android ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
3 YouTube ကလေးငယ်များ
Apple ကဆိပ်ကမ်းများတွင်ကလေးငှားရမ်းခြင်းဖြစ်စေ၊ ကလေး၏ဖြစ်စေပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
စတင်ရန် ကျနော်တို့ Settings သို့သွားနှင့်အသုံးပြုမှုအချိန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်ရှိသည်Continue ကိုနှိပ်ပြီး "This is my [device]" or "ဒါကကလေးရဲ့ [device]" ကိုရွေးပါ။
ဒီနည်းနဲ့ Terminal ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကာလနှစ်ခုစလုံးကိုဘယ် applications တွေသုံးနေတယ်ဆိုတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကလေးသည်စက်ဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစောင့်ကြည့်ပြီးထိန်းချုပ်ပါ။ သင့်ကလေးအားအက်ပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမှလည်းတားဆီးနိုင်သည်။ apps များအတွင်းဝယ်ယူမှု နှင့်အများကြီး
built-in အက်ပ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုမှုကိုသင်ကန့်သတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် app တစ်ခုသို့မဟုတ် function တစ်ခုကိုပိတ်ထားပါက၎င်းကိုသင်မဖျက်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုပင်မမျက်နှာပြင်မှခေတ္တဝှက်ထားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် Mail ကိုပိတ်ထားပါက၊ ၎င်းသည်သင်ပြန်ဖွင့်သည့်တိုင်အောင်မူလမြင်ကွင်းတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မလိုလားအပ်သောရှာဖွေမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တုန့်ပြန်မှုများသို့မဟုတ် Siri online ရှာဖွေမှုများကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိရိယာ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးချိန်ညှိချက်များကမည်သည့်အက်ပ်များကစက်ပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲအင်္ဂါရပ်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်လူမှုရေးကွန်ယက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုကင်မရာကိုအသုံးပြုခွင့်တောင်းရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်၊ သို့မှသာသင်ဓါတ်ပုံများရိုက်။ ၎င်းတို့ကိုတင်နိုင်သည်။
သင့်မှာ Android ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Android အတွက်ဤနည်းလမ်းအတွက်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာအသုံးပြုသူများစွာကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် ဆက်တင်များ / သုံးစွဲသူများ။ ဤမီနူးမှခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ် sms အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော parameters များကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ Terminal ကိုကလေးတစ်ယောက်အားခေတ္တထားသောအခါဤနည်းလမ်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် app တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုသို့သွားသည်။
ဂူးဂဲလ်ကစားနည်းကမိဘထိန်းချုပ်မှုကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကြောင်းအရာကိုအသက်အားဖြင့် disable လုပ်နိုင်သောကြောင့်၊ ဤအရာသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်၊ ဤနည်းဖြင့်လိင်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုရှောင်ရှားရန်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုစစ်ထုတ်သည်။
ဤထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ကိုအက်ပ်များနှင့်ဂိမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်တေးဂီတနှစ်ခုလုံးတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒီရွေးစရာကို Google Play App ကိုယ်တိုင်၏ settings / မိဘထိန်းချုပ်မှုမီနူးမှရနိုင်သည်။
လူကြီးများနှင့်ကလေးများအားလုံးအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး application တစ်ခုမှာ YouTube ပင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ငါတို့သိသည်အတိုင်း YouTube ကအရာအားလုံးကိုတင်တယ်, ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့လိုချင်တာကငါတို့ကလေးတွေဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာတွေကိုလက်လှမ်းမမှီကြဘူး။ YouTube ကလေးတွေအပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာကအကောင်းဆုံး။ သူတို့မှာ Family Friendly content ကိုသာသုံးနိုင်တဲ့နေရာပါ.
ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများသည်ဗီဒီယိုကြည့်နေသည့်အချိန်ကိုသိရန် (သို့) ထိန်းချုပ်ရန်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်သောအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ရန်အပလီကေးရှင်းတွင်သူ့ဟာသူရှိသည်။ ဒီ application နှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် iOS ကို como အန်းဒရွိုက်.
ဂူဂဲလ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့သောဤအပလီကေးရှင်းသည်ကလေးသူငယ်များ၏မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီအက်ပ်နှင့်အတူ သင့်ကလေးသည်မိုဘိုင်းဖုန်းကြည့်နေသည့်အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်နှင့်လျှောက်လွှာတစ်ခုနှင့်အတူသူတို့ဘယ်လောက်အချိန်ကုန်သွားသည်အကြောင်းကိုလည်း။
ဤနည်းဖြင့်သင်၏ကိရိယာကိုသင်အသုံးပြုနေသောအမျိုးအစားကိုသိရှိနိုင်လိမ့်မည် သူတို့ကမိုဘိုင်းနှင့်အတူရှိနိုင်ရန်အတွက်သင်အချိန်ကန့်သတ်ချက်များသတ်မှတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ်အချို့ applications များပိတ်ဆို့ခြင်း။
ဤအပလီကေးရှင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြုပြင်ထားသောစက်တည်နေရာကိုသိနိုင်သည်၊ ဂူဂယ်လ်ပလေးစတိုး၌တွေ့နိုင်သောအကြောင်းအရာများ၏မြင်နိုင်မှုအကန့်အသတ်ကိုသတ်မှတ်ပါသို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်၏ SafeSearch မှ အရွယ်ရောက်ပြီးသူရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်ကလေးများနှင့်မသင့်တော်သောအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ပါ။
ဤရွေ့ကားနှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်သောဤလျှောက်လွှာ၏အသုံးဝင်ဆုံးရွေးချယ်စရာအချို့ကို iOS ကို လျှင်အဖြစ် အန်းဒရွိုက်:
တည်နေရာဖြေ - ကလေးရဲ့သွားတဲ့နေရာရဲ့သီးခြားမြေပုံတခုကိုသူတို့ချိတ်ထားတဲ့ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုသုံးတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာသိဖို့ကိရိယာရဲ့တည်နေရာမှတ်တမ်းကိုဖွင့်နိုင်တယ်။
အက်ပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြေ - ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အကောင့်ရှိစက်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက် ၃၀ အတွင်းမည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်မည်မျှအသုံးပြုထားသည်။
မျက်နှာပြင်အချိန်တနင်္လာနေ့ကနေတနင်္ဂနွေအထိမိုဘိုင်းမျက်နှာပြင်ဖွင့်နိုင်တဲ့နာရီအရေအတွက်ကိုသင် configure လုပ်နိုင်တယ်။ ထို option လည်းရှိပါတယ် အိပ်ချိန်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုခွင့်မပြုသည့်နာရီအနည်းငယ်ကြာသည်။
applications များဖြေ - အခုပဲ install လုပ်ထားတဲ့ applications တွေ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ applications တွေကိုသင်မြင်တွေ့ရပြီးသင်အသုံးမပြုလိုတဲ့သူတွေကိုပိတ်ထားနိုင်တယ်။
ကိရိယာဆက်တင်များဖြေ - ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အကောင့်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ settings ကိုသင်စီမံနိုင်တယ်။ သင်သည်သုံးစွဲသူများကိုထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်နိုင်သည်။ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကို enable သို့မဟုတ် disable လုပ်နိုင်သည်, ဒါမှမဟုတ် developer ရွေးချယ်စရာ။ တည်နေရာချိန်ညှိချက်များကိုလဲပြောင်းပြီးစက်ရှိအပလီကေးရှင်းများအားခွင့်ပြုထားသည့်ခွင့်ပြုချက်များကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဤမိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုအက်ပလီကေးရှင်းကသင့်ကလေးများအားကိရိယာများနှင့်အချိန်သုံးရန်အချိန်ကန့်သတ်ထားသည်သင်သုံးစွဲသည့်ဝဘ်ဆိုက်များကိုထိန်းချုပ်။ ပိတ်ထားပါ။ မင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ် သင့်ကလေးဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအချိန်မှန်မှာကြည့်ပါ အချိန်မရွေးစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ။ လျှောက်လွှာ၏အခမဲ့မူကွဲသည်ကလေးတစ် ဦး ကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်အညွန့်တွေထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငွေပေးချေတဲ့ဗားရှင်းကိုသင်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ ဤနေရာတွင်သင် download ပြုလုပ်နိုင်သည် iOS ကို.
ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းအတွက်စျေးနှုန်းများသည်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၄၂.၉၅ မှဈေးအသက်သာဆုံးနှင့်ဈေးအကြီးဆုံးယူရို ၁၀၆.၉၅ အထိရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ကလေးများမိုဘိုင်းကို Android နှင့် iOS ပေါ်တွင်မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း
Goya Awards 2020 ၏အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များကိုအွန်လိုင်းတွင်မည်သို့ကြည့်ရှုမည်နည်း